in uu dhaco heshiis leysku raaco oo aay soo naqato midnimadii Soomaali waa wax lagu hanweynyahay, in kasto dhinacyada qaar iyana aay ku hanweynyihiin wax ka duwan taas oo ah ineey arkaan dhul aan wax badan ka baaxad weyneyn Dowlada Fetikaan oo aay Maamulaan Qabiil ama laba .
Wada hadaladu ma marin ayaa la oran karaa tilaabooyinkii lagama maarmaanka u ahaa iyo waliba Xiligii loo baahnaa sabatuna waxeey tahay arimo badan oo is biirsaday owgood iyo habacsanaan muuqata ma gaarin heerki laga rabay ineey joogto xiligaan .
Dhinaca Dowlada Federaalka waxaa jira habacsanaan iyo heegan la,aan baahsan waxaa taa wehliya ayaan dhihi karaa iska warqab la,aan iyana jirta , waxaase ii muuqata in qaabka loo xulay Eragda aad looga baaraan dagay ahna dad aad u qibrad badan tii oo aay jirto ineysan awood fulineed ku laheyn deegaanada aay kasoo jeedaan ama matalaan balse aan madax looga dhigin qofkii ku haboonaa.
Madax Ergada waxaa uu ahaa Wasiirka Arimaha Gudaha ee Dowlada Federaalka waa sax waa Aqoonyahan in badan kusoo jiray Waxabarashada Soomaaliya Madaxna ka ahaa Jamaacada simada waxaanse leys weeydiin waxa loo diraayo iyo Qibrada uuu leeyahay waxeey aheyd in loo diro wadahadalada dhanka waxbarashada iyo xariirka Daladaha ee ma aheyn in loo diro Wadahadalo nuucaan oo kale ah .
Waxaa kale oo iyana aan laga fikirin Da,da iyo ka warqabka uu u leeyahay arintaan sababtoo goob joog ma aheyn isku biiridii 60kii iyo in kastoo uu joogay Gooni isu taaga soomaaliland ee 1991, waxaana lagu qaldamay ayaan la dhihi karaa in Ardey loo diro wadahadal heerkaan oo kale ah ee lagu go,aaminaayo Mustaqbal Dad iyo Deegaan hadane wax badan tabanaaya.
Waxaa kale oo ka qaldamay Dowlada in markii horeba lagu degdegay Erayada qaar ee lagu qoray Heshiisyadii iyo war Murtiyeedyadii horay usoo baxay taas oo aay ka muqaneysay in aay qorin Dadkii qibrada u lahaa habraaca sharciga ee adeegsiga Ereyada qaar sida qorida iyo ku saxixida laba Dowladod oo kala ah Somalia iyo Somaliland waxeey taasi iminka sababtay in aay heshay Somaliland waxyaabo aay awood u heshay sida go,aan ka gaarida xubanaha ka qeyb galaayo wada hadalada iyo soo jeedinta sharuudo lagu xiro wadahadalada .
Hadii aay horay u ogolaatay Dowladu in aay la hadleyso Dowlada la yiraa Soomaaliland maxaa loo buunbuuninaa wadahadlo hiigsigoodi la gaaray oo ah aqoonsi cad oo loo muujiyay ama aay heshay Somalilad maa laga wada hadlo sidii leysu dhaafsan lahaa xiriir laba doodladood dhex mara ileen weey dhamaatay arintaasi.
Dhinaca Maamul Goboleedka Soomaaliland waxeey ku qaldan tahay kuna madax adeegtay in aay fiirto Dadka kasoo jeeda Deegaanada aay Maamusho ee doorbidaya ineey wali ka mid noqdaan dowlada Dhexe waxna la qeybsadaan Bulsha weynta soomaaliyeed sida ka muuqata hanaanka 4.5 ama 5 Beelood ee wax lagu qeybsado .
Tusaale Cali Jamaac Jingili waxuu ka mid ahaa Ergada aay diidan tahay soomalilad deegaan ahaana kasoo jeeda soomaalilad Aabihii Jaamac Jingili waxuu ahaa Barasaabkii ugu horeeyay ee Magaalada Hargessa marka in hada la yiraa waxba kuma lihid go,aan ka gaarida aayaha Hargeesa waa qalad laga galay shaqsiyasa Cali Jaamac .
Marka kor laga eedo arintaan Jamciyada qurumaha ka dhaxeysa ma ogola in soomaali kala go,do sababtoo ah waxey mar waliba iyo kulan waliba ku celcelshaan in aay dhowrayaan midnimada iyo wada jirka Soomaaliya .
Sida aay tilmaamayaan xeeldheerayaasha Wada hadalu Gaba gabada waxeey noqon doontaa mid leysku mari waayo ilaa la qaado Afti guud waxaana soo bixi doonta laba midood in Dadka Reer Hargessa ku daydaan koonfur Suudaan oo aay helaan Madaxbanaani cad isla markaana aay dagaalo badan la galaan Dadka Degan Degaanada ku dhaw dhaw ee hadaba diidan ineey hoos galaan Dad doonaya Go,id ama aay ku daydaan Dadka Reer Irland oo aay diidaan ineey go,aan kana sii mid noqdaan Somalia.